Barista CAD / GIS - Geofumadas
Waa maxay isolines - noocyo iyo dalabyo
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay khadadka dusha - isolines -, noocyadooda kala duwan, codsiyada laga helo maadooyin kala duwan wuxuuna ka caawin doonaa akhristayaasha inay helaan aqoon dheeraad ah oo ku saabsan.
Qaadashada koorsada QGIS hubaal waa himilada dad badan sanadkaan. Barnaamijyada furan ee furan, QGIS waxay noqotay xalka sida aadka ah loo dalbado, shirkadaha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahayba. Marka, xitaa haddii aad si fiican u maamusho ArcGIS ama qalab kale, ku dar xaashidaada shaqada ...
Baridda CAD / GIS, qgis
Sannadkii hore waxaan awooday inaan goobjoog ka ahaado sida saaxiibkay "Filiblu" ugu khasbay inuu dhinac iska dhigo barnaamijkiisa Visual Basic for Applications (VBA) oo uu ku dareemay raaxo aad u wanaagsan, isla markaana uu gacmihiisa u duubay sidii uu u baran lahaa Python meel ka soo bilaabanaysa, si loo horumariyo is waafajinta qalabka. "SIT Municipal" oo ku taal QGIS. Waa codsi hadhay ...
Baridda CAD / GIS, Featured, qgis
ArcGIS - Buugga Sawirka
Kani waa dukumiinti kobcinaysa oo laga heli karo Isbaanish, oo leh waxyaabo aad u qiimo badan, taariikh ahaan iyo farsamo ahaanba, oo ku saabsan maareynta muuqaalka ee la xiriira cilmiga dhulka iyo nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed. waxyaabaha badankood waxay leeyihiin xiriiriyeyaal bogag ay ku jiraan waxyaabo is-dhexgal ah. The…
ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Featured, Geospatial - GIS